आइसिसिले आफै विधान बनाएर दिए हुन्छ नेपाललाई :क्यान महासचिव प्याकुरेल – Vision Khabar
। १० पुष २०७४, सोमबार २०:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लगातारको विवाद पछि विश्व क्रिकेट संघको सर्वोच्च निकायबाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को सदस्यता खारेज हुने खतरा बढेसगै नेपाली क्रिकेटको भविष्य के हुन्छ त अब ? सबैको चाँसोको बिषय बनेको छ । यो विषयलाई लिएर निर्वाचित भनिएको क्यानका महासचिव अशोक नाथ प्याकुरेलसँग भिजन खबरका पवन शर्माले केहि दिन अगाडि गरेको कुराकानीको सार ।
आइसिसिको अन्तिम भनीएको वार्निङ लेटर पठाएको बारे के भन्नुहुन्छ ?
आइसिसिले २२ तारिक भित्र फेरी एउटा जवाफ देउ भनेर पठाएको हो । यस्तो पत्र बारम्बार आइरहेको हो बाहिर आएको जस्तो हल्ला हैन । यो निर्णयहरु पहिलै अप्टोबरको बोर्ड मिटिङमा भैसकेको हो अहिले आइसिसिले आधिकारीक रुपमा लेटर पठाएको हो ।
सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान आइसिसिको विपरीत क्यानले विधान परिमार्जित गरे पछि अस्विकार गरेको हैन र ?
आइसिसिले तिमीहरुले सम्शोधन गरेको विधान मान्दैनो भनेको हैन । जुन विधान सल्लाहकार समितिबाट पारीत भएको थियो त्यसमा क्यानले केही परीवर्तन भएर पास भएको देखीयो ती परीवर्तन विधानले नेपाली क्रिकेटलाई असर गर्ने हुँदा प्रक्रिया अगाडि नबढाउ भनेको मात्र हो । त्यही भएर प्रदेशको सम्पुर्ण कार्य स्थगित गरिएको हो ।
अब हुने आइसिसि बोर्ड मिटिङले नेपाललाई सस्पेन्स कायम गर्छ कि खारेज नै ?
त्यो त मैले भन्ने विषय हैन । हामीले जे कुरा पहिला देखी भन्दै आएका थियौ त्यही नै हो अहिले पनि । आइसिसिको प्रतिनिधि आउछौ भनेका छन्, उनीहरु आएपनि फेरी सल्लाहकार समिति, क्यान सबैको फेरी संयुक्त बैठक हुन्छ । त्यस बैठकमा सबै समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।
नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुले तपाईहरु दोषी ठान्छन, के भन्नुहुन्छ ?
यो नँया कुरा हैन आफ्नो आफ्नो किसिमको बुझाई हो । हामी नेपाली क्रिकेटको लागी यो समस्या समाधान गर्न सल्लाहकार समिति बनाउदै, विधान बनाउदै २ वर्ष देखी लागी परेका छौ । त्यसमा आइसिसिले सस्पेन्सन हटाउन अझै पनि केहि सर्त पुरा गरेका छैनौ त्यसैले क्यानमा के कस्तो कुरा भयो जानकारी गराउ भनेको छ ।
आफुभए क्रिकेट नत्र हुदैन भन्ने प्रवृति कहिले छोड्ने ?
आफुभए क्रिकेट नत्र नहुने भन्ने हाम्रो प्रश्न हैन । हाम्रो प्रश्न चाँही जुन विधानको विषयलाई लिएर शुरुदेखी आइसिसिलाई आफ्नो कुरा राखेको हो । आइसिसिमा राखेको हाम्रो विधानकोे अडानलाई हामिले हामीभए हुने नत्र नहुने भनेको हैन । जुन विधानको समस्या हो छिटो समाधान हुनेछ ।
खारेज भए नेपालको अवस्था के हुने अनि तपाईहरु आफुलाई दोषि मान्नहुन्छ कि मान्नुहुन्न ?
धेरै नराम्रो हुन्छ नि, सस्पेन्समा त नेपाली क्रिकेटलाई गार्यो भैरहेको छ । खारेजको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौ र्दुभाग्यपुर्ण हुन्छ । हामी कुनै हालतमा पनि दोषी छैनौ, कसरी दोषी भयौ हामीलाई भन्दीनु पर्यो, यदी खारेजै होस भन्ने भैदिएको भए त सबै स्टेकहोल्डर एकै ठाँउमा आएर पहल नै हुन्थेन होला । हामी आ–आफ्नो अडानमा हुन्थ्यो होला नि । यदि हाम्रो कुरा गलत हो भने आइसिसिले आफै विधान बनाएर दिए हुन्छ नेपाललाई, अनि जुन पक्षले लागु गर्ने हो सरकारसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढे भैहाल्यो नि हामी निर्वाचित क्यानलाई क्यान्सिल गरेर । हामीलाई के ही आपत्ति छैन ।
क्यान तपाईहरु बाहेक हरुले संचालन गर्न सक्दैन र ?
गरौ न बैधानिक बाटो बाट आएर गरौ, अबैधानिक बाटो बाट नगरौ, नेपाली क्रिकेटमा हामिले वा अर्कोले मात्र संचालन गर्ने भन्ने छ र ? बैधानिक रुपमा आए सबैलाई बाटो खुला छ ।